PHOTO: supplied Sicela ukufuniswa ubaba kaNqobile Ndlela ongaziwa kanti umama wakhe uThoko Mavis Ndlela ongasekho wase Sweetwaters kwaNxamalala. Sicela onolwazi athinte uSocial Worker Z.L Gwala ku 033 5050 084.
Kumenywa abesibongo sakwaKhanyile emcimbini wokuvala unyaka mhlaka 28 kuDisemba eMsinga eMakhankane kwaMehlomlungu ngo 9 ekuseni. Ngeminye imininingwane bangathintana no Mpume 079 8065 291, Mfuthi 079 0595 912, Nkosiyakhe 076 5634 045. Isimemezelo sikhishwe uMkhumbi Khanyile 074 1821 209
Sicela ukufuniswa ubaba kaZanele Nkosi, Thandeka Nkosi no Siphelele Nomthandazo Nkosi. Abazalwa ngu Ntombifuthi Gertrude Nkosi ongasekho owayehlala eMbizane kanti ubaba wabo akaziwa. Sicela onolwazi athintane noSocial Worker Ndlovu ku 033 5050 084.
The Child and Welfare Society of Pietermaritzburg is looking for the whereabouts of the father and mother of Nwabisa Mtolo. Anyone with information may contact the social worker Ms N Ngcekwa on 033 3428 971.
Sicela ukufuniswa u Khulekani Zulu ongu baba ka Zanothando Gcabashe. Umama wakhe uThenjiwe Gcabashe onolwazi angathinta uSocial worker N.Madlala 033 392 8621.
Sicela ukufuniswa uMandla Memela noMandisa Sipengani abazali baZamagumbi Sipengani onolwazi angathinta uSocial Worker N.Madlala 033 392 8621
Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi Pietermaritzburg Service Office (Mbilakhahlela) ucela onganolwazi ngabazali babantwana uMbuyiselo noNontombi Xolo base-Ashdown.Okukholakala ukuthi abazali babo babesebenza eFranklin Farm.Umama wabo waziwa ngoNomabhaso kanti uBaba akaziwa.Ongaba nolwazi sicela axhumane noSohlalakahle Ntokozo Zondi kulenombolo 033 392 8620/3.
Sicela ukufuniswa uBaba ka Sesanele Ndlela ozalwa nguThandi Princess Ndlela eSobantu ongasekho emhlabeni onolwazi sicela athintane me Social Worker u K.Msomi ku 033 392 8621/033 392 8606.